काठमाडौं, १६ असार । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको एउटा भिडियो भाइरल भयो । मन्त्री भुसालले एक कार्यक्रममा अमेरिकी हेभी मेटल विधाका संगीत बजाउँदा सलह कक्रक्कै पर्ने बताएका थिए ।
‘अहिले भर्खर म आउँदै थिएँ, अष्ट्रेलियामा एकजना भाइ पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ मेलबर्नमा । उहाँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो फोन पत्ता लगाएर,’ मन्त्री भुसालले भनेका छन्, ‘उहाँले हेभी मेटल सङ भन्ने एउटा हुँदो रहेछ, अमेरिकामा एउटा ब्याण्डले गाएको, त्यो गीत सुनाएपछि चाहिँ त्यो (सलह किरा) जहाँको त्यहीँ हुने रहेछ, कक्रक्कै परिहाल्दो रहेछ … ।’
भुसालले संगीतले सलहलाई लठ्याउने जानकारी पाएको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गीत तथा संगीत झिकाउन लागिपरेको बताएका छन् । उनले ‘सलह कीरा कक्रक्कै हुने’ अमेरिकी हेभी मेटल म्युजिक ब्यान्डको गीत संकलन भइरहेको जानकारी दिएका थिए ।
7मन्त्री भुसालले नेपालमा सलह आतंक संगीतद्वारा नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै गरेको तर्क विवादमा तानिएको हो । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्ने क्रममा उनले ठूला ठूला स्पिकरहरुबाट अमेरिकी हेभी मेटल बिधाका संगीतहरु बजाए सलह किराहरु जहाँको त्यहीँ भएर कक्रकिने बताएका छन् ।
सलह हेभी मेटल विधाको संगीतले कक्रक्कै पर्छ त ? अहिलेसम्मको विश्वको अभ्यासहरु हेर्दा यसबारे स्पष्ट जानकारी पाउन सकिएको छैन । मन्त्री भुसालले दावी गरेजस्तो वा उनलाई प्राप्त सूचनालाई पुष्टि गर्न नसकिने विज्ञहरु बताउँछन् ।
सन् १९६० को अन्त्यतिर अमेरिका र बेलायतबाट सुरु भएको हेभी मेटल संगीत आफैमा अरु संगीत विधाभन्दा अलि चर्को र आक्रमक हुने गर्छ ।
मन्त्री भुसालको अभिव्यक्तिपछि सूचनाहरु पछ्याउँदा साझापोस्टले मसिन हेड नामक अमेरिकी साङ्गीतिक समूह भेट्टायो, जसमा सलहलाई सम्बोधन गरिएको अन्टु द लोकस नामक गीत फेला पर्छ । त्यहाँ सलह नामक एउटा गीत पनि रहेको छ । तर, उक्त गीत बजाउँदा सलह नियन्त्रणमा फाइदा मिलेको खबरहरु फेला पार्न सकिएन ।
रातो कमिलामा विद्यावारिधि गरेका डा. समुद्र जोशी सलहलाई नियन्त्रण गर्न विषादी छर्नुपर्ने र कुनै कुनै आवाजको प्रयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । संगीतले लट्ठ पार्ने होइन, यसले बाधा पुर्‍याउँछ । ‘संगीतले सलह नाश गर्दैन, मात्र बाधा पुर्‍याउँछ । ऊ बस्न चाहँदैन, सलह एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण गराउन संगीतले भूमिका खेल्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संगीत मात्रै नभनौं कुनै पनि तरिकाको आवाज निकालेर यसलाई तर्साउने काम गर्न सकिन्छ ।’
यस्तो अभ्यास अफ्रिकातिर पनि गर्ने गरिएको डा. जोशीले स्पष्ट पारे । संगीत मात्रै भन्दा पनि चर्को आवाज निकाल्ने जुनसुकै उपाय अपनाएर सलहलाई स्थानान्तरण गर्न सकिने उनको बुझाई छ ।
चर्को आवाजले सलह भाग्ने र हेभी मेटल संगीत पनि चर्को हुनाले सलह भगाउन सकिने तर्क गर्न सकिन्छ तर पनि संसारभरीको अभ्यासबाट सलह र हेभी मेटल संगीतबीचको सम्बन्धलाई पुष्टि गर्ने अभ्यासहरुबारे कुनै पनि सूचना थाहा नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
भारत र पाकिस्तान जस्ता कतिपय मुलुकमा चर्को स्वरमा गीत, साइरन र हर्न बजाएर सलह भगाउने प्रयास भने गरिने गरिएको छ । यद्यपि, यसले सलहलाई ‘ठाउँको ठाउँ कक्रक्कै पार्ने’ कुनै वैज्ञानिक आधार र अभ्यास नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।